मगलवार, असार १०, २०७६ १२:१०:१०
शुक्रवार, आश्विन १९, २०७५ न्यूजमिसाइल
सन्ताेष कार्की (युवराज) ।
उदयपुर । तत्कालीन नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी माओवादीको १० वर्षे जनयुद्धको नेतृत्व गरेर आउने क्रममा अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्री समेत बन्न भ्याएका डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्राय चर्चाको केन्द्रविन्दुमा हुन्छन् । माओवादी आन्दोलन टुटफुट हुँदै विभिन्न पार्टीहरु बनेका छन् । अहिले तिनै भट्टराईले पनि ‘नयाँ शक्ति पार्टी’ खोलेका छन् । त्यही नयाँ शक्ति पार्टीका केन्द्रिय प्रवक्ता हुन्, पूर्व नेकपा एमालेको पृष्ठभुमिबाट आएका डम्वर खतिवडा । नयाँ शक्तिको सरकार, संविधानलाई हेर्ने दृष्टीकोण अन्य पार्टीकोभन्दा फरक छ । त्यही फरक विषय बस्तुमा केन्द्रित रहेर नयाँ शक्ति पार्टीका प्रवक्ता डम्बर खतिवडासँग गरेको कुराकानीको संक्षिप्त सार प्रस्तुत ।
नयाँ शक्ति पार्टी के गरिरहेको छ ?
नयाँ शक्ति पार्टी नेपालको वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति हो । हामी तेस्रो ध्रुव भन्छौ । राजनीतिक, वैचारिक आन्दोलन हो । त्यसो भएकाले पार्टी संगठन निर्माण गर्ने अभियानमा छौ । मुलधारका दलले छोड्दै गएका एजेण्डाहरु पक्रने क्रममा छौ । नयाँ शक्ति स्थापना भएको २ वर्ष पुग्दा नपुग्दै देशमा ३ निर्वाचन भयो । परिणाम जे जस्तो आएपनि, हामीले लुम्विनीमा एउटा बैठक गर्यौ। त्यसलाई हामी लुम्विनी संकल्प भन्छौ । त्यस बैठकमा नेपालको लागि तेस्रो राजनीतिक शक्ति रुपमा नयाँ शक्तिलाई बनाउने निष्कर्ष निकाल्यौं । विकास, सम्बृद्धिको लागि तेस्रो शक्ति अति आवश्यक छ । ठीक यतिखेर चाँही हामी पार्टीलाई सशक्त बनाउन संठगन विस्तार, प्रशिक्षण लगायतका काममा छौ ।
मुलधारका पार्टीले छोडेको एजेन्डाहरु के के हुन ?
मुलधारका राजनीतिक पार्टीले छोडेका मात्र होईन, केही नयाँ र मुलधारका पार्टीको सिद्धान्तमै नभएका एजेण्डा नयाँ शक्तिमा छ । नयाँ राजनीतिक सिद्धान्तको परिकल्पना गरेका छौ । सम्मुनत् समाजवाद, वा सहभागितामूलक लोकतन्त्र, विश्वको परिपेक्षमा थर्ड पोजिशनको कुरा गरिरहेका छौ । काँग्रेस वा कम्यूनिष्ट, पूँजीवाद र साम्यबाद पुराना भए । अव यी ब्राण्ड पुराना भए । नयाँ ब्राण्ड निर्माण गर्नु अहिलेको आवश्यकता छ ।
कम्यूनिष्ट पनि होईन, काँग्रेस पनि होईन, पूँजीवाद र साम्यवाद पनि होईन, भनेपछि नयाँ शक्ति कुन ब्राण्डको खोजीमा छ ?
काँग्रेस र कम्यूनिष्ट भन्ने विचारधाराहरु प्mलप भए । विगतमै सकियो । जस्तो कि, क्यालकुलेटर कि घडी, या क्यालकुलेटर कि टाईपराइटर भन्यो भने, किन एउटा छनौट गर्नु पर्यो । कम्प्यूटरको युग छ । क्यालकुलेटर, घडी, टाईपराइटरले गर्ने काम कम्प्यूटरले गर्छ । कम्प्यूटरको युगमा काँग्रेस वा कम्यूनिष्ट भन्नु विगतको कुरा गर्नु हो । अहिले कम्प्यूटर जस्तै नयाँ राजनीतिक शक्तिको खोजीमा जनता छन् । जनताको चेतना विकसित छ । त्यसो भएकाले नयाँ राजनीतिक शक्ति निर्मण गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ । त्यही नयाँ शक्ति निर्माणको वहसमा नयाँ शक्ति पार्टी छ । नयाँ ब्राण्ड ल्याउन नयाँ शक्ति वहसमा छ ।
त्यो वहसका तथ्यहरु बुँदाहरु के के हुन् नि ?
त्यही तथ्यहरु भन्दै छु । विगतका पार्टीको भन्दा नयाँ शक्तिको एजेण्डामा धेरै विभिन्नता छ । हामी प्रत्येक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको पक्षधर हौ । त्यसले शासकीय स्वरुपमा ठूलो परिर्वतनको माग गर्छ । अहिलेको संघीयतामा भएको राज्य पुर्नसंरचना मान्दैनौ । संघीयता गौरवको कुरा हो । ७ प्रदेशको सिमाङकन मान्दैनौ । संघीयतालाई नयाँ ढंगले विकास गर्नु पर्छ । समावेशीताको मुद्धा, न्यायिक मुद्धा प्रष्ट छैन ।
विशेषगरी सिमान्तकृत जनसमुदायका जातीय, साँस्कृतिक, भाषिक, लैङगिक र क्षेत्रीय अधिकारहरु अझै अपुग छन् । राज्य प्रणालीले सुशानको क्षेत्रमा केही गर्न सकेको छैन । प्रभावकारी छैन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, दण्ड अधिकारी निकायहरु । सरकारको सेवा दिने क्षमतामा अभिबृद्धि छैन । चुस्त दुरुस्त प्रशासन सम्यन्त्र छैन । यो हाम्रो ठूलो मुद्धा हो । आर्थिक विकासको मुद्धा छ । आर्थिक विकास विना मानवीय खुशी सम्भव छैन ।
विश्वमा खुशी अर्थतन्त्रको कुरा छ । मुख्य कुरा भष्टाचार हो । जस्तो चुनाव लड्नको लागि मान्छेहरु लाखौं करोडौं खर्च गरिरहेका हुन्छन् । हार्ने उम्मेद्वारको डुब्छ । जित्नेले भ्रष्टाचार गरेर उकास्छ । अर्को चुनावमा लगानी गर्छ । राजनीति त व्यापार भइगयो । यस्ता गलत राजनीतिक स्टिमलाई परिवर्तन गर्ने नयाँ शक्तिको मुख्य मुद्धा हो ।
संघीयतामा नेपाललाई ७ प्रदेश उपयुक्त छैन त ?
छैन भनेर भन्दा, देशमा खर्चको हिसावले त, सात प्रदेश पनि टिक्ला जस्तो छैन ?
यही, समस्या बुझनु पर्छ । खर्च संघीयताले बढाएको हो कि, राजनीतिक प्रशासनिक संरचनाले बढाएको हो । कत्रो, कर्मचारी, सेना, प्रहरी चाँहिन्छ भनेर जान्नु पर्छ । कतिवटा राज्यको लेवलहरु कायम गर्नु भाको छ ? कति तलव भत्ता दिनु भाको छ ? मनिलिउँ, लाखौं पर्ने गाडी संघीयताले एउटा वडाअध्यक्षलाई किन भन्छ र ? गाँउपालिका र नगरपालिकाका प्रमुखलाई करोड पर्ने गाडी चढ भन्छन् ? जहाँ सडक छैन, त्यहाँ एक करोड पर्ने गाडी गाँउपालिकाका अध्यक्षले किनिरहेका छन ? के त्यो संघीयताले यस्तो गर भन्छ ? यस्तै कारणले खर्च बढेको हो । जनप्रतिनिधिको संख्याले होईन, त्योसँग जोडिएका प्रर्वद्धनले खर्च बढेको हो । खर्च घटाउने उपाय पनि छन् । त्यता पनि हेर्नु पर्यो नि ।
के हुन्, त्यो खर्च घटाउने उपायहरु ?
केन्द्रको साँसद संख्या किन २६५ बनाउनु प¥यो ? १५१ को बनाउँदा हुन्न ? प्रादेशिक संसदको संख्या विश्वमा काँही ठूलो छैन । भारतको गोवा, सिक्कीम लगायतका प्रदेशमा हेर्दै काफी हुन्छ । १०३ सम्मका ठूला प्रादेशिक साँसदहरु किन चाहियो । ३१ देखि ५१ को संख्यामा प्रादेशिक साँसदहरु बनाउँदा भइहाल्थ्यो । नचाहिने प्रशासनिक निकायहरु किन कायम राख्नु ? १ लाख आर्मी किन चाहियो ? नेपाल आर्मीले चीन वा भारतसँग युद्ध हुँदा लड्छ ? नेपालमा आर्मी राख्नु भनेको, नेपाल सर्वोसत्ता सम्पन्न देश हो, भन्नु हो । यहाँ आर्मी पनि छ भनेर देखाउने संकेत मात्र हो । अन्तराष्ट्रिय शान्ति मिशनहरुमा हाम्रो सहभागिताको कुरा हो । आर्मीलाई २५ या ५० हजारमा किन नझार्ने ? सशस्त्र प्रहरी बल किन जरुरी छ ? हिजो माओवादी जनयुद्धको वेला एउटा फोर्सको रुपमा विकास गरिएको थियो । त्यसलाई खारेज गर्दा भयो । देशलाई आर्मी, पुलिस, सशस्त्र प्रहरी, प्रादेशिक साँसद र केही नचाँहिने सम्यन्त्रले खर्च बढाएको हो । विभिन्न सम्यन्त्र बनाउनु जरुरी छैन । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह छ । जिल्ला समन्वय समिति किन चाहियो ।
होईन, नेपालको सन्दर्भमा कति तहको सरकार र कुन कुन सम्यन्त्र ठिक हुन्छ ?
केन्द्र प्रदेश र स्थानीय तह हो । जिल्ला समन्वय समिति नहुँदा पनि ठिक हुन्छ । जिससले खर्च मात्र बढाएको छ । केन्द्रमा खर्च घटाउन केन्द्रका साँसदको संख्या घटाउँ । प्रदेशका साँसदको पनि घटाउँ । निर्वाचन प्रणाली फेरौं । निर्वाचन प्रणाली फेरेपछि मुख्य मन्त्री र प्रदेश प्रमुख राख्नु पर्दैन । प्रदेश प्रमुख खारेज हुन्छ । जनताबाट प्रदेश प्रमुख निर्वाचित भएर आउँछ । त्यही खर्च घट्यो । प्रादेशिक साँसदको संख्या घटाउँ, त्यही खर्च घट्छ । यस्ता कुरामा कसैले पनि विश्लेषण र मुल्यांकन नगर्ने, अनि संघीयता खर्च बढायो भन्नु गलत हो । संघीयताले खर्च बढाउँदैन ।
संसारका विकसित, आधुनिक, शक्तिशाली देशहरु छन् । ति सवैमा संघीयता छ । चाहे अमेरिका होस्, वेलायत । शक्तिशाली देश हुन् । साना विकसित देशमा स्विजरल्याण्डा, नर्वे, स्विडेन, क्यानडा सवैमा संघीयता छ । यी देशमा प्रभावकारी शासन प्रणाली, सुशासन छ । मानवीय विकास उच्च छ । भ्रष्टाचार कम छ । जस्तो साउथ अफ्रिकामा रंगभेद थियो । त्यहाँ रंगभेद टुटेर संघियता लागू भएपछि समावेशी मुलुक भएको छ । विकसित देशमा हाम्रो जस्तो परिपाटी र सँस्कार छैन ।
अरु देशको कुरा नगरौं, नयाँ शक्ति पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई आफू पनि सहभागी भएर जारी गरेको संविधानमा देशलाई ७ प्रदेश बनाउने, प्रादेशिक साँसद र संघीय साँसदको संख्या टुङगो लगाउने काम सहमतिमै गरेका हुन् । अहिले बाबुराम भट्टराईकै पार्टीले सवै गलत भयो भन्न्न मिल्छ ? संविधानको खिल्ली उडाएको जस्तो हुँदैन ?
हुँदैन । विलकुल हुँदैन ।
बाबुराम भट्टराई स्वयम अगुवा भएर संविधान जारी गर्नु भएको थियो ? कसरी हुँदैन ?
यसलाई व्यक्तिगत रुपमा लिनु हुँदैन । व्यक्ति, सँस्था र आन्दोलनलाई बुझनु पर्छ । त्यतिवेला भट्टराई माओवादीको नेता हुनुहुन्थ्यो । त्यतिवेला माओवादी पार्टी साँसदमा तेस्रो दल थियो । पुराना पार्टी र सँस्थाहरुले ठिक विचार बोक्न सकेनन् । सोही कुराले भट्टराईले कम्यूनिष्ट मुभमेन्ट, माओवादी आन्दोलन छाडेर नयाँ शक्ति पार्टी बनाउनु भयो । संविधान जारी गर्दा भट्टराई एउटा पार्टीको साँसद हुनुहुन्थ्यो । त्यतिवेलाको शक्ति सन्तुलन, राजनीतिक पार्टीको भविष्य हेरेर भन्नु पर्छ । सव कुरा गलत भएर नै माओवादी आन्दोलन, कम्यूनिष्ट मुभमेन्ट छाडिदिनु भएको हो । नभए उहाँ पनि प्रचण्ड जस्तै एमालेसँग एकीकरणमा जानु हुनुथ्यो । माओवाद नै ठिक छ, भन्नु हुन्थ्यो होला । किन भन्नु भएन ? ओली जस्तै संसारको उत्कृष्ट संविधान भनेर दिपावली गरेर हिड्नु हुन्थ्यो होला । पहिलो संविधानसभा फेल भइसकेको थियो । दोस्रो संविधानसभा फेल हुँदा संविधासभाले संविधान बनाउँछ भन्ने कन्सेप्ट फेल हुन्थ्यो । संविधान दिनु पर्ने बाध्यता थियो । संविधान दिनको लागि भट्टराईले सम्झौता गर्नु भयो ।
भट्टराईले संविधान दिनको लागि मात्र सम्झौता गर्नु भएको हो त ?
यहाँ ३ कुरा छन् । एउटा संविधासभाको कन्सेप्ट सक्सेस् बनाउनु पथ्र्यो । संविधान जारी नभएको भए देशमा गणतन्त्र आउँदैन थियो। दोस्रो संविधानसभा फेल भएको भए, जनतामा संविधासभाबाट संविधान नबन्ने रहेछ भन्ने भ्रम सिर्जना हुन्थ्यो । फेरि यो संविधानका आधरभूत सिद्धान्तहरु ठिक छन् नि । बहुदलीय लोकतन्त्र, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समावेशी त ठिक हुन् ।
वेठिक चाँही के भयो ?
संविधानका सिद्धान्त एकातिर, अभ्यास अर्कोतिर भयो । जस्तो शासकीय स्वरुप ठिक अवलम्बन गरिएन । प्रदेशको सिमाङकन ठिक ढंगले गरिएन । नागरिकताको अधिकार ठिक ढंगले गरिएन । यस्ता धेरै कुरा छन् । सुशासन प्रत्याभूत हुनेगरी कर्मचारीतन्त्रको व्यवस्था गरिएन । संविधानका सिद्धान्तहरु नयाँ भए । तर, अभ्यास पुरानै भयो ।
कसरी नयाँ संविधानमा पुरानो अभ्यास भयो ?
यहाँ त, कस्तो भयो भने नी...बयलगाडा डाइभरलाई बहलमान भन्छौ । बलयगाडाको डाईभरलाई लगेर ट्याक्सीको डाईभर बनाइयो। हिजो बयलगाडा कुदाउँथिस्, अव ट्याक्सी नकुदाएर हुन्छ, भनियो । बयलगाडाको डाइभरलाई टयाक्सी कुदाउन लगाइयो । जनताले पनि बहलमानलाई ल्याएर ट्याक्सी डाईभर बनाए । सिकाएर, प्राक्टिस गराएर ट्याक्सी चलाउन दिएनन् । सिधै चला भने। बहलमानले ट्याक्सी सकेन ।
नयाँ शक्ति पार्टीलाई ‘नयाँ बोतलमा पुरानो रक्सी’ भनेर टिक्का टिप्पणी पनि गर्छन नि?
लोकन्त्रमा मान्छेहरुले एउटा राजनीतिक पार्टीको बारेमा टिक्का टिप्पणी गर्न सक्नु हुन्छ । जस्ले गर्नु हुन्छ, उहाँहरुको नागरिक अधिकार, लोकतन्त्रिक अधिकार हो । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हो । मलाई यसबारे खासै बोल्नु छैन ।
गाँउ-गाँउमा त, नयाँ शक्ति पार्टीका कार्यकर्ता देखिदैनन् ?
विसौं वर्षपछि धेरै पार्टी पार्टीहरु झाँगिएका छन् । भारतकै केजारीवालकै पार्टीले कति वर्ष पछि चुनाव जितेको छ । नयाँ शक्तिले रातारात चमत्कार गर्नु पर्छ भन्ने छैन । कसैले चमत्कार गर्नु पथ्र्यो भन्दैमा त, हुँदैन । विश्वका धेरै पार्टी वर्षौपछि देशको मूल रानीतिक धारमा पुगेका छन् । सत्तामा पुगेका छन् ।
भनेपछि फेसबुक र ट्वीईटरमा मात्र हो त, नयाँ शक्ति पार्टी ?
तपाईले भनेको कुरा मिल्दैन । किन मिल्दैन भने, नयाँ शक्तिको अवस्था त, एउटा तथ्याङकमा हेर्नु पर्र्यो नि । राज्यका विभिन्न तहहरु छन् । केन्द्रिय साँसदमा हामी एक सिटले प्रतिनिधित्व गरिरहेका छौ । प्रादेसिक साँसदमा ३ सिट छ । सम्पूर्ण स्थानीय तहमा २ वटा मेयर र २ उपमेयर, अनि २२ वटा वडाध्यक्ष जितेका छौ । त्यसमा १ सय ९६ वटा वडा सदस्य जितेका छौ । १ लाखभन्दा कम भोट ल्याएका छौ । ६३ जिल्लामा जिल्ला संगठन छ । विदेशमा छरिएका नेपालीहरुको सहयोगी संगठन छ । अन्य विभिन्न संगठनहरु पनि छन् ।
नयाँ शक्तिको लुम्विनी संकल्प के हो ?
गौतम बुद्ध लुम्विनीमा जन्मनु भएको हो । बुद्ध दर्शनलाई मान्छेहरुले एउटा धर्मको रुपमा मात्र लिन्छन् । लुम्बिनी संकल्प भनेको, ‘हामीले बुद्धिज्मलाई पोलिटिकल थर्डको रुपमा पनि लिन्छौ ।’ बुद्धिज्मभित्र, पोलिटिकल थर्ड छ । संगठन, समाज सुधारका तत्वहरु,रुढीवाढीबाट मुक्त हुने विधिहरु, कार्यकारण सम्बन्धका कुराहरु छन् । फिलोसिप बुद्धीज्ममा छ । फेलोसिप खोज्नु विदेश जानु पर्दैन । त्यही भएकाले वैचारिक थर्ड पोल्ट अर्थात वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्ने लुम्बिनी संकल्प हो ।
छोटकरीमा, नयाँ शक्तिको नेकपा सरकारलाई हेर्ने नजर के हो ?
यो सरकार बन्दै गर्दा, तिनै सरकारमा भएका दुई पार्टी एकीकृत हुँदै गर्दा, तिनै पार्टीका दुई अध्यक्षले भन्नु भएको थियो । हामी जेट विमानमा उडिरहका छौ । तर, अहिले गति हेर्दा, थोत्रो साईकल जस्तो छ । थोत्रो साईकलमा मरी मरी पाइडल मारेको जस्तो देखिन्छ। गति काँही पनि छैन । रिजल्ट केही छैन । कन्फ्यूजन सरकार हो । भ्रमित सरकार हो । के गर्नु पर्ने हो भन्ने थाहा छैन । लक्ष्य उदेश्य थाहा नभएको सरकार हो । हामीले यसैगरी हेरिरहेका छौ ।
प्रकाशित मिति: शुक्रवार, आश्विन १९, २०७५, ०९:१०:००
श्रम शोषण भएपछि आन्दोलन गरेका थियौ : मुक्ति दाहाल
फजुल खर्च घट्नुको साटो बढ्यो : प्रा.डा. गोविन्द पोखरेल
भ्रमण वर्षमा छिमेकीलाई फोकस : सुरज वैद्य
७० वर्षमा हासिल गरिएको उपलब्धि एकै वर्षमा
शनिवार, जेठ ४, २०७६ न्यूजमिसाइल
सरकारले कार्यक्रम घोषणा गर्छ, कार्यविधि बनाई दिदैन
शनिवार, बैशाख २८, २०७६ न्यूजमिसाइल
एसइईको नतिजा प्रकाशनको तयारी अन्तिम चरणमा मगलवार, असार १०, २०७६ 32